WFP oo laga digay raashiinka ay soo galiso Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 19 June 2016
Muqdisho ( Mareeg)-Xilli Dhawaan Garoonka Diyaaradaha Aadan Cade ee Magaalada Muqdisho lagu qabtay Raashiin dhacay oo la sheegay in loo siday deegaanno ka tirsan Gobollada Koofureed ee Soomaaliya islamarkaana howlwadeen ka tirsan Hay’adda WFP ee cunada u qaabilsan Qaramada Midoobay dadka loo qabtay raashinkaas uu ku jiro ayaa waxaa ka hadlay waxgarad iyo masuuliyiin dhibaatadaaasi.
Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi ( Laangare ) oo Shabelle la hadlay ayaa ku eedeeyay Hay’adda WFP in ay qeyb ka tahay dhibaatada Soomaaliya , mar haddii dowladda Soomaaliyeed ay ku aragtay raashiin dhacay oo ay noo soo safrisay sida uu yiri.
Bedel ayaa hoosta ka xariiqay in WFP iyadoo ka faa’ideysaneysa la xisaabtan la’aanta iyo Kontarool la’ida tayada raashiinkeeda ay dadka Soomaaliyeed raashiin dhacay ama sun dadka Soomaaliyeed u qeybineyso taas oo halisteeda leh sida uu sheegay
Tan iyo wixii ka dambeeyay 1991 kii ayuu ku eedeeyay Bedel Laangare in Raashiin dhacay ay ku soo daabuleysay WFP dalka Soomaaliya, isagoo cadeeyay in waqtigaan aan raashiin looga baahneen WFP maadaama dalagii ka baxay beeraha Soomaaliyeed la gaaray waqtigii ay soo go’ayeen.
Waxaana uu ku taliyay in raashiinka WFP Kontarool gaar ah la marsiiyo maadaama raashinka ay keento ay sababi karaan aafooyin aan si fudud looga soo kabsan waa sida uu hadalka u dhigaye.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Gedo oo iyana Shabelle la hadashay ayaa ku tilmaamtay raashiinka dhacay ee WFP sida ay sheegtay ugu tala gashay qaar ka mid ah Gobollada dalka uu ahaa Shirqool ayna ka rabaan in Magdhow ay ka bixiso.
Dhinaciisa Taliyaha Qeybta Booliska Gobolka Gedo Maxamed Sheekh Cumar ayaa tilmaamay in Ciidamada ammaanka ay amreen in ay baaritaanno ka dhan ah raashiinka dhacay ee WFP ay ka sameeyeen degmooyinka Gobolkaas , isagoo xaqiijiyay in ay hayaan macluumaad la xiriira diyaaradda raashiinka dhacay lagu qabtay in ay ka horeysay mid kale oo si qarsoodi ah loo soo gaarsiiyay Deegaanno Gedo ka tirsan oo ay hadda baadi goobayaan rashiinkaasi saarnaa.
Ugu dambeyn Col Maxamuud Guhaad Tima Jilac oo ka tirsan Saraakiisha Magaalada Baardheere ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in howlgal ay ka sameeyeen keydadka hay’adda WFP ee degmadaasi ay ku soo qabteen raashiin dhacay iyo kuwa kale oo waqti kooban ay u harsan yihiin ayna dab qabadsiin doonaan dhawaan.
Dalka oo ay soo galaan Maciishado kala duwan oo ku yimaad qaabab Ganacsi iyo Samafal ayaanu jirin Kontaroolo lagu baarayo tayada adeegyadaasi gaar ahaan ay sameeyaan Wasaaradaha u xil saaran sida Caafimaadka , Ganacsiga iyo kuwa la halmaala.